SBO - 28-2-2016 and Oromo Voice Radio - 27-2-2016 -
Oromo Voice Radio (OVR) February 27, 2016
SBO – February 28, 2016
3 thoughts on “SBO – 28-2-2016 and Oromo Voice Radio – 27-2-2016”
Qeerroon Oromoodha; Oromoon Qeerroodha.
Ol'aanaa E. says:
Salphina jiru uf jireenyaa Jalaa bahuuf gatii barbaachisu kennuun, ar’aan booda akka hin hafin hubannee, gatii shaffisaa kafaluuf if qopheysuuna, ar’a, amma, daqiiqaa tanaa eegallee, hudi Keenya mataa keenyatti himuu qabna. Yaa Jidda dhiiga kiyyaa.
Injifannoon tan ar’aa tan Oromoo dhufaa dabraa keysummeysituuti.
ahmed fuad haji says:
salamtan tiya tan jalala isin ha gesu bakka jirtaniti